Knowledges Zone: အလွယ်ကူဆုံး File Sharing နည်းပညာအား အသုံးချခြင်း
ကျွန်တော်တို့တွေ အင်တာနက်ပေါ်ကနေ တစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့ သဘောကျတဲ့ သီချင်းတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ အခြားအခြားသော ဖိုင်တွေ အပါအဝင် မိမိမျှဝေချင်ရာ မှန်သမျှကို တစ်စုံတစ်ယောက်ဆီ ပို့ဆောင်တော့မယ် ဆိုတဲ့ အခါ လုပ်ဆောင်ရမယ့် နည်းလမ်းတွေ ၊ လုပ်ဆောင်လို့ ရနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေ မရေမတွက်နိုင်အောင် ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ထဲကမှ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ငွေ ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အချိန်တွေကို ချွေတာပြီး အရာအားလုံးထဲမှာ အလွယ်တကူနဲ့ အသုံးအတည့်ဆုံး ဖြစ်နိုင်မယ့် File Sharing တစ်ခု အကြောင်း ကျွန်တော် ဆွေးနွေးသွားပါ့မယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေ သဘောကျတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ ၊ သီချင်းတွေ ၊ ဓာတ်ပုံတွေကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေခံစားချင်တဲ့ အခါမှာ အလွယ်ကူဆုံး အလျင်မြန်ဆုံး နဲ့ လုံခြုံမှု ရှိရှိ ဆောင်ရွက်ချင်တဲ့ အခါ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်လို့ ရနိုင်မလဲ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိနေတဲ့ ပမာဏ ကြီးမားတဲ့ ဖိုင်တွေကို အလွယ်တကူ လွှဲပြောင်း ဝေဌနိုင်မယ့် ဝေမျှနည်းက ဘာများ ဖြစ်မလဲ။
အဖြေကတော့ - Opera Unite ပါ။
ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိနေတဲ့ ပမာဏ ကြီးမားတဲ့ ဖိုင်တွေကို အလွယ်တကူ လွှဲပြောင်း ဝေဌနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကတော့ Opera Unite ကို အသုံးပြုဖို့ ပါပဲ။ သူ့ကို အသုံးပြုရတာ သိပ်လွယ်ကူပါတယ်။ Opera Unite ကို ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာမှာ ထည့်သွင်းပြီး လိုအပ်တဲ့ Configuration တွေ ပြင်ဆင်ပြီးပြီ ဆိုတာနဲ့ ၊ မိမိစက်မှာ ရှိနေတဲ့ မိမိဝေမျှချင်တဲ့ ဖိုင်အတွက် URL ကို Opera Unite ကနေ တစ်ဆင့် ဖန်တီးပြီး Password နဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ ဝေမျှချင်သူဆီ ပို့လွှတ်လိုက်ပါမယ်။ မိမိပေးပို့လိုက်တဲ့ URL ကို ရရှိတဲ့ သူက မိမိပေးတဲ့ URL အတိုင်း ဖိုင်ရှိရာဆီ Password နဲ့ အတူ ဝင်ရောက်ပြီးသူ အလိုရှိရာဖိုင်ကို Browser ကနေ တဆင့် ဒေါင်းလုပ်ရယူသွားယုံပါပဲ။
ဒီနည်းလမ်းက ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ မြင်တွေ့နေကျ File Sharing နည်းလမ်းတွေနဲ့ မတူညီပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ နေ့တိုင်းထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ ဖိုင်ဝေမျှမှု ပုံစံက ကျွန်တော်တို့ ဝေမျှချင်တဲ့ ဖိုင်ကို File Sharing ဆိုဒ် တစ်ခုခုဆီ အရင် Upload တင်ရမယ်။ အဲလို Upload တင်ပြီးမှ တဆင့် ရလာမယ့် အဲ့ဖိုင်အတွက် URL ကို ဝေမျှချင်သူထံ ပေးပို့မယ်။ ဒါကတစ်နည်း ပါ။ နောက်တစ်နည်း အနေနဲ့ ပမာဏကြီးမားတဲ့ ဖိုင်တွေကို Sharing လုပ်ဖို့ ဆိုရင် BitTorrent နည်းပညာနဲ့ လုပ်ဆောင်တဲ့ နည်းလည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ ( ၂ ) မျိုးလုံးမှာ မကောင်းတဲ့ အချက်က မိမိဝေမျှချင်ရာ ဖိုင်တစ်ခု ရှိလာယုံနဲ့ မိမိပေးပို့ချင်သူဆီ ရောက်နိုင်ဖို့အရေး ကြားကမဆိုင်တဲ့ Third Parties ဆိုဒ် တစ်ခုဆီ ကိုယ့်ဖိုင်ကို အလဟဿ Bandwidth အကုန်ခံပြီး တင်ပေးနေရတဲ့ ပြဿနာပါ။ ( တစ်ခြား နည်းလမ်း တစ်ခု အနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင် Private Torrents တစ်ခု ဖန်တီးပြီး ဝေမျှလို့ရတာမျိုးလည်း ရှိသေးပေမယ့် Tracking Sever တစ်ခု အမြဲရနိုင်ဖို့ အရေးလုပ်ဆောင်ရတာ ကလည်း အမြဲတမ်း မလွယ်ကူလှပါဘူး။ ) Opera Unite ကတော့ ဒီပြဿနာတွေ ကင်းပါတယ်။ Setup လုပ်ဆောင်ရတာလည်း လျင်မြန်လွယ်ကူသလို၊ အလိုရှိရာဖိုင်ကို ဝေမျှချင်သူနဲ့ ရယူချင်သူ ကြားမှာ Direct connection ရယူပြီး Sharing လုပ်ဆောင်သွားယုံပါပဲ။ သုံးစွဲရလွယ်ကူသလို Free လည်း ဖြစ်တာကြောင့် စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့လက်မနှေးသင့်ပါဘူး။
File sharing နဲ့ မစိမ်းလှတဲ့ ကျွန်တော်တို့ Myanmar Family အနေနဲ့ကတော့ တစ်ခုခု Sharing လုပ်မယ်ဆို Ifile.it နဲ့ Mediafire ကို ဦးတည်ကြတာများပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဒီ့ ဆိုဒ် နှစ်ခုရဲ့ အနှစ်သာရကို သိလို့ စိတ်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ထောက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ ဝေမျှချင်တဲ့ ဖိုင်က အများအတွက် မဟုတ်ပဲ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းသော သူအတွက် သို့တည်းမဟုတ် မိမိရဲ့ မိသားစုဝင်တွေ အတွက် ဖြစ်မယ် ဆိုရင်တော့ ifile တို့ mediafire တို့ dropbox တို့အစား Opera Unite က ပိုပြီး အသုံးတည့်လှမယ် ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆို ifile တို့ mediafire တို့ဆို ဖိုင်တွေက တင်လိုက် ဖျက်ခံရလိုက် dropbox ဆိုရင်လည်း free accounts တစ်ခုအတွက် အများဆုံး limit က 2GB ... ဒီလို အခြေအနေမျိုးတွေအပြင် တစ်ခုခု ကို ဝေမျှဖို့ အရေး Upload တင်ရတဲ့ ပြဿနာကရှိ ... ဒီ အခြေအနေတွေ အားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ Opera Unite တစ်ခုတည်းနဲ့ ကျော်ဖြတ်သွားပါမယ်။
လွယ်ကူသော ပြင်ဆင်မှုများဖြင့် Opera Unite
ကျွန်တော်ပြောပြောနေတဲ့ Opera Unite ဆိုတာ Opera Browser ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်လို့ သူ့ကို install လုပ်ဆောင်ချင်တယ် ဆိုရင် ပထမဆုံး အနေနဲ့ Opera Browser Latest Version ကို ဒေါင်းလုပ်ချပြီး install လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Opera Browser ကို install လုပ်ဆောင်ပြီးသွားပြီ ဆိုတာနဲ့ Opera Unite ကလည်း တဆက်တစပ်တည်း ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ သူ့ကို ချက်ချင်း အသုံးချလို့ မရသေးပါဘူး။ အနည်းငယ် ပြင်ဆင်မှု လုပ်ဆောင်ရပါဦးမယ်။ ကျွန်တော် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ နေရာကနေ တဆင့်ချင်းသွားပြီး Opera Unite ကို Enable လုပ်ပါမယ်။
နောက်ပေါ်လာမယ့် Box တွေကနေ တဆင့်ချင်း ဆက်သွားရင် Setup လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်။ Enable ဖြစ်လာတဲ့ Opera Unite ကို အသုံးချပြီး File Sharing လုပ်ဆောင်ဖို့ အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ပုံအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ့မယ်။
ဖော်ပြပါ ပုံအတိုင်း File Sharing > Start ကို စတင်လိုက်တာနဲ့ မိမိစက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ မိမိ Share လုပ်ဆောင်ချင်ရာ ဖိုင်တစ်ခုကို Box တစ်ခု တက်လာပြီး Choose ကနေ တဆင့် ရွေးချယ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 522x283.
လတ်တလောမှာ ကျွန်တော့်စက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ Apple နဲ့ အတူ လူသိများတဲ့ CEO - Steve Jobs ရဲ့ Presentation Secrets အကြောင်း စာအုပ်လေး ကို အရင် Sharing လုပ်ဖို့ ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ ရွေးချယ်ပြီးရင် OK လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် အဲ့ စာအုပ်ကို ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်ဖို့ အတွက် Link တစ်ခု ကို ခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဖော်ပြပါ Link ကို ကော်ပီ ကူးပြီး မိမိဝေဌချင်သူဆီ ပို့လိုက်ပါ။ အဲ့ Link အတိုင်း တစ်ဖက်လူဝင်လိုက်မယ် ဆိုရင် password တစ်ခု တောင်းပါလိမ့်မယ်။ သူတောင်းတဲ့ password ကို cNzf ဆိုတဲ့ link အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဟာကိုထည့်ပေးရပါမယ်။ အဲတာကြောင့် တဆက်တစပ်တည်း သိထားရမှာက မိမိ Share ပေးလိုက်တဲ့ ဖိုင်ကို သက်ဆိုင်သူ တစ်ဦးတည်းကို Privacy နဲ့ ပေးချင်တယ် ဆိုရင် file link ကိုရော password ကိုပါတွဲပြီး ပေးလိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ password မခံချင်ဘူး ရှုပ်တယ်ထင်ရင်လည်း မိမိစက်ကနေ ပေးထားတဲ့ ဖိုင်ကို Public ပေးလိုက်လို့ ရပါတယ်။
ဖော်ပြပါ link အတိုင်း ဝင်ရောက်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ download ချဖို့အတွက် ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Share ပေးထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို ခုလို မြင်တွေ့ရပါပြီ။ မိမိဒေါင်းလုပ်ချချင်ရာ ဖိုင်ရဲ့ အလယ်နားလေးကို mouse ပွတ်ထိလိုက်တဲ့ အခါမှာ Download ဆိုတာ အလိုလျောက်ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပြီး သူ့ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ download လုပ်ငန်းစဉ် စတင်ပါလိမ့်မယ်။
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 624x228.
Opera Unite ဆိုတာ ခုလိုမျိုး File Sharing လုပ်ဆောင်ဖို့ တစ်ခုတည်း အသုံးချလို့ ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခြား စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေ များစွာ ကျန်ပါသေးတယ်။ တဆက်တစပ်တည်း ကျွန်တော် အသိပေးချင်တာက Opera unite ဟာ Perfect ဖြစ်တဲ့ File Sharing လုပ်ဆောင်နည်း တစ်ခုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ သူ့မှာလည်း အားနည်းချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ ဆိုရရင် ကျွန်တော်တို့ Opera Unite ကို သုံးပြီး Share ပေးထားတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ဖက်လူက ကိုယ် Share ပေးထားတာကို ဆက်ခံရရှိနိုင်ဖို့ မိမိဘက်မှာ Opera Browser ကိုဖွင့်ပြီး Sharing လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း လုပ်ဆောင်ထားပြီးသား ဖြစ်နေဖို့ လိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင် တစ်ဖက်လူက ကျွန်တော်တို့ Share ပေးထားတဲ့ ဖိုင်ကို Access လုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ နောက်တစ်ခု အနေနဲ့ အသုံးမတတ်ရင် 404 error ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် နည်းပညာ တစ်ခုကို စမ်းသပ်ကြည့်တာ အကျိုးမယုတ်ပါဘူး။ ခုချိန်မှာ ပြည့်စုံဖို့ လိုအပ်နေသေးပေမယ့် နောင်တစ်ချိန်မှာ Opera Unite က တစ်ခေတ်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူဆိုနိုင်မလဲ .... အဲတော့ ကျွန်တော် Steve Jobs ပြောတဲ့ စကား နဲ့ အဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်။